Ghọta Mkpa Ntuziaka Ntuziaka Ngwaahịa (IQG) | Martech Zone
Mediazụta mgbasa ozi n'ịntanetị adịghị ka ịzụ matarasị. Onye na-eri ihe nwere ike ịhụ akwa ụra n’otu ụlọ ahịa nke ha chọrọ ịzụ, n’amaghị na n’ụlọ ahịa ọzọ, otu ihe ahụ bụ ego dị ala karị n’ihi na ọ dị n’aha ọzọ. Ọnọdụ a na-eme ka o siere onye zụrụ ya ike ịma kpọmkwem ihe ha na-enweta; otu ihe ahụ na-aga maka mgbasa ozi n'ịntanetị, ebe a na-azụta ma ree ma weghachite nkeji site na ndị na-eweta ngwaahịa dị iche iche, na -emepụta oke ahịa ahịa nke ndị na-azụ ahịa nwere ntakịrị nghọta.
Okwu a sitere na ọtụtụ puku ụlọ ọrụ dị na mbara igwe, ọtụtụ n'ime ha nwere asụsụ dị iche iche, iwu dị iche iche, usoro dị iche iche na ụzọ dị iche iche esi arụ ọrụ ha. Enweghi otu uzo ozo mere ka ndi TAG Ntụziaka Ndepụta Ngwaahịa (IQG), usoro ntinye akwukwo nke ndi na ere ahia di iche. IQG na-enye usoro azụmaahịa gbasara azụmahịa, na-enye ndị na-azụ ahịa ohere ịme mkpebi dabere na mma. Ọ ana achi achi kpuchie maka nchekwa nchekwa na nghọta maka ndị na-azụ ahịa.
Ebumnuche nke mmemme a bụ ịzụlite gburugburu ebe ntụkwasị obi n'ọma ahịa ma belata esemokwu ọ bụla. Ntuziaka ndị a na-enye asụsụ nkịtị nke na-akọwa njirimara nke ngwaahịa na mgbasa ozi na mgbasa ozi gafere usoro uru mgbasa ozi. Ndị na-ere ere nwere ike iji usoro ngosi a na-ekpughere gafee ụlọ ọrụ iji hụ na nrube isi n'ọtụtụ buru ibu ma kwado mkpebi esemokwu na mkpesa.
Ndị na-ere ahịa nwere ohere iji merie mpempe akwụkwọ site na isonye na mmemme IQG ma nweta nkwado nke ndị ọzọ na njikwa na usoro ha metụtara. Usoro iwu ndị a na-eme ka ndị na-azụ ahịa nwee nghọta zuru oke banyere ihe ha na-azụ, na ndị na-ere ahịa na-ekpughe ihe ọmụma kwesịrị ekwesị iji kwado nke a; n'ụzọ zuru oke dị mma iji na-azụ ahịa.
IQG na emeziwanye ulo oru dum site n’ichedo ndi mgbasa ozi na ndi mbipute. Ntuziaka ndị a na-akwado ọdịnaya na usoro okike na-echekwa ụdị na ndị mbipụta ka ha ghara ijikọta ọdịnaya anaghị echekwa echedo. Ndị na-akpọsa ngwa ahịa nwere ike ịgba mbọ hụ na anaghị agbasa mgbasa ozi ha na saịtị porn, ndị na-ebipụta akwụkwọ nwere ike igbochi mgbasa ozi dị ala nke na-erughị maka mbipụta ha na saịtị ha.
Akụkụ ọzọ dị mkpa nke IQG bụ na ọ na-amanye ndị sonyere ka ha gbasaa, usoro achọrọ nke ọma na nzukọ ahụ. Otu nyocha ahụ na-enyocha usoro ma hụ na ụlọ ọrụ na-agbaso ụkpụrụ nduzi ndị a. Nkwenye a na-emepụta ego na nhazi na ụlọ ọrụ. N'ime nke a, ndị nyocha ahụ na-ewepụ echiche nke ihe ọmụma gbasara ụlọ ọrụ site na ime ka ụlọ ọrụ dee akwụkwọ ma soro usoro.
N'ikpeazụ, IQG na-etinye uru ebe uru kwesịrị ịdị. Site na weeding nontransparent n'ígwé onye na-amaghị ebe, Player na-enwe ike iduzi azụmahịa ọzọ were were. Nke a na - enye ndị mgbasa ozi na ndị na - ebipụta akwụkwọ ohere ikwu okwu n’ezoghị ọnụ banyere ihe ha na - eme na ntanetị. Site na iji ngalaba mgbasa ozi dị elu karịa na egwuregwu, ndị mgbasa ozi nwere ike ịme mkpọsa na-aga nke ọma. N'otu oge ahụ, ngwa ahịa a na-enye ndị na-ebipụta akwụkwọ ohere iji nweta CPM dị elu site na ịba uru kwesịrị ekwesị maka ngalaba ndị a.
Mgbasa ozi n'ịntanetị bụ azụmahịa na-eto eto na-agbanwe agbanwe, yana ụlọ ọrụ ahụ na-etolite, ndị egwuregwu nwere ohere ịkpụzi ma mee ka ntụzịaka ya sie ike. IQG na-eme ka ogo dị mma na-ebuli elu ma na-enye ndị nwere akara mgbasa ozi kachasị mma na nke kacha baa uru. Nke a bụ nzọụkwụ ọzọ na atụmatụ anyị dị iche iche na-agbanwe ma na-agbanwe agbanwe iji hụ na ịdị mma na uru maka mmadụ niile - ụdị, ụlọ ọrụ na ndị mbipụta.
Banyere itinye aka: BDR
Tinye aka: BDR na-eduzi ụgwọ na ụkpụrụ na asambodo mgbe a bịara n'ihe banyere antifraud, malware na àgwà ngwaahịa. Bido: BDR ghọrọ otu n'ime ụlọ ọrụ izizi ka ha wee nyochaa nke ha na ụkpụrụ QAG ma ha na-enweta usoro IQG asambodo. Tinye aka: BDR na-aga n'ihu na-arụ ọrụ na-aga n'ihu na ndị nkwusa iji lụso ihe ndị na-emetụta ogo ngwaahịa.
Tags: ngwa ahiamgbasa ozimgbasa ozi wayongwaahịa mgbasa oziogo mgbasa oziantifraudàgwà yiri nkataNtuziaka Ogologo Ngwaahịaiksgmalwaremgbasa ozi n'ịntanetịndị nkwusamkpadoTAG Ntụziaka Ndepụta Ngwaahịaihe nkwado nke atọ